चाँदी अस्वभाविक आयातबारे समितिको प्रश्न Arthabyapar.com || Point Media Pvt. Ltd.
के चाँदीको खाटमा सुत्नकालागि चार महिनामै ९ अर्बको चाँदी ल्याईएको हो ?
२५ पुस/अर्थ र व्यापार– संसदीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा चाँदी अस्वभाविक आयातबारे प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग गरिएको छलफलमा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले यस्तो प्रस्न गरेका हुन् । उनले चाँदी खाटमा सुत्न यतिधेरै परिमाणमा चाँदी आयात गरिएको हो र ? भन्ने प्रश्न गरे ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वितेका ४ महिनाको अवधीम ९ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढीको चाँदी आयात भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले चाँदी आयातमा सटही सीमा लगाएको छ । सभापति शाहले भने, ‘चार महिनामै किन यति धेरै चाँदी किन आयात भएको छ, हाल नेपालील चाँदीकै खाट बनाएर सुतिरहेका छन् र ?।
यसैगरि, समितिका सभापति शाहले सुन चाँदी, गाडी, पेट्रोलियम पदार्थ, साथै कच्चा पाम र सोयानिन तेलको आयात बढ्दा मुलुकमा बैंकिङ तरलतामा चाप परेको जिकिर गरे । उनले आयातीत चाँदीको उपयोगको बारेमा सरकार र सम्बन्धि निकायले अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । शाहले भ्यालु एड भएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान दिन नसक्ने पाम तेल र सोयाविन तेलको आयात बढ्नु अर्थतन्त्रको लागि उपयुक्त नभएको बताए ।
आयात बढेकैले तरलता अभाव भएको हुँदा यसमा नियन्त्रण आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । ब्याजदर लगायतका क्षेत्रमा नियामकीय निकायको हस्तक्षेपकारी भुमिका सकारात्मक भएको भन्दै उनले नियामक निकायको काम नै आवश्यक ठाउँमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।
त्यसैगरि,सभापति शाहले वितेका चार महिनामा नै ४ खर्ब कर्जा प्रवाह भएको भन्दै एक वर्षमा १२ खर्ब कर्जा दिने ? भनेर प्रश्न गरे । उनले ठेक्काको धरौटी वापत १ खर्ब रहेको भन्दै त्यसलाई वाणिज्य बैंकमा पठाएर उपयोग गरिनु पर्ने बताए । सभापति शाहले तरलता अभाव भएको बेलामा धरौटीमै खर्ब रुपैयाँ रहेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे ।
लेखा समितिले देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिबारे छलफल गर्न अर्थ सचिब मधु मरासिनी र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।